Sidee cabsida noocyadeeda kala duwan ay saameyn ugu yeelan kartaa ganacsigaaga FXCC Blog
Aug 13 Qiimaha Ganacsi ee Forex, Faallooyinka Suuqa • 1053 Views Comments Off on Sida cabsida noocyadeeda kala duwan ay saameyn ugu yeelan karto ganacsigaaga
Mawduucyada ganacsiga cilmi nafsiga iyo maskaxdaada lama siiyo kalsooni ku filan marka laga hadlayo mowduuca ganacsiga 'FX'. Suuragal ma ahan in la xisaabiyo saameynta guud ee maskaxdaada ay ku yeelan karto natiijooyinka ganacsigaaga, sababtoo ah waa cunsur aan la aqbali karin oo aan macquul aheyn in la qiimeeyo. Marka loo eego qaabka ganacsatada-cilmi-nafsiga ay tahay waxa ugu muhiimsan oo laga baqo (marka laga hadlayo ganacsiga) ayaa u muuqan kara qaabab badan. Waxaad la kulmi kartaa cabsida guuldarrooyinka, cabsida guuldarrooyinka iyo cabsida ka maqnaanshaha (FOMO). Kuwani waa seddex qeexitaan oo lagu xareyn karo maaddada cilmu-nafsiga waxayna u baahan tahay inaad si dhakhso leh u dajiso tallaabooyin aad ku xakameynayso cabsidaas, si aad horumar ugu hesho ganacsade ahaan.
Midkeenna Ganacsada ma jecla inuu lumiyo, haddii aad go’aansatay inaad ganacsi FX ka dhigatid hiwaayad ahaan ama mustaqbal aad ku shaqaysan karto ka dib (iyadoo loo eegayo ereyo fudud) waxaad u qaadatay inaad ka qaybqaadato inaad lacag sameyso. Ama labadiinuba waxaad filaysaan inaad: kabto dakhligaaga, inaad keyd geliso keydkaaga shaqada, ama inaad ugu dambeyntii noqotid ganacsade waqti-buuxa ka dib muddo waxbarasho iyo khibrad dheer leh. Waxaad qaadaysaa talaabooyinkan sababta oo ah waxaad tahay qof firfircoon oo doonaya inuu wax uun noloshiisa ku hagaajiyo, ama kan kuwa ay jecel yihiin oo uu ku gaaro guul dhaqaale. Sidaasoo kale waxaad tahay qof tartan tartamaya, sidaa darteed, ma jecla inaad lumiso. Waa inaad la socotaa oo aad qabataa cudurkaan maadaama ay tahay xoog aad u xoog badan oo kaa caawin doona inaad ku ekaato bartilmaameedkaaga iyo hamigaaga xilliyada ay arrintu adkaaneyso.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad si dhakhso ah u bartaa inaadan u qaadin khasaaraha shaqsi ahaan, aqbal in luminta xirfadaha shaqsiyadeed ay qayb ka tahay qiimaha lagu sameynayo ganacsigaan. Ciyaartoyda heerka tennis-ka ee Elite kuma guuleystaan ​​dhibic kasta, ciyaartooyda caalamiga ah kuma dhaliyaan goolal kasta oo goolka laga dhaliyo, waxay ciyaaraan ciyaar boqolkiiba. Waxaad ubaahantahay inaad kobciso fikirka ah in ku guuleysiga abaalmarintu aysan aheyn mid ku saabsan helitaanka 100% guul darre, waxay ku saabsan tahay sameynta istaraatiijiyad guud oo leh rajo wanaagsan. Xusuusnow, xitaa 50: 50 istiraatiijiyad ah guul istaraatiijiyad kastaa waxay noqon kartaa mid si weyn waxtar u leh, haddii aad lacag badan geliso guuleystayaashaada inta aad ka luminayso kuwa kaa lumaya.
Inta badan ganacsatada waxay soo mari doonaan marxalado kala duwan oo metamorphosis ah, marka ay marka ugu horeysa ogaadaan warshadaha ganacsiga waxay ula tagi doonaan ganacsiga FX si xamaasad leh. Waqti gaaban kadib markay shardi ka dhigayaan warshadaha, waxay bilaabaan inay ogaadaan inay baranayaan waxkasta oo warshadaha ka mid yihiin: kakanaanta, eraybixinta iyo xirfadaha loo baahan yahay inay guuleystaan, waxay qaadan doontaa waqti aad u badan iyo dadaal badan waxay markii hore filayeen.
Waad ka saari kartaa cabsida guuldarada adiga oo aqblaya aalado kala duwan oo la xiriira ganacsiga. Ugu dambeyntii waad fashilmi doontaa haddii aad ku maamusho maareynta lacagtaada adoo adeegsanaya xakamaynta khatarta adag. Ma adkaan doontid maxaa yeelay muddo gaaban kadib markii aad ka soo muuqatid warshadaha tafaariiqda, waxaad baran doontaa xirfado cusub oo falanqayn ah oo caddayn kara inay aad waxtar u leedahay haddii aad xirfadahaaga ugu wareejiso fursadaha kale ee shaqo; kaliya ka fikir daqiiqad wacyigalinta lama huraanka ah ee arrimaha dhaqaalaha ee lagaa saari doono. Ma adkaan doontid maxaa yeelay waxaad heshay aqoon ku sii jiri doonta nolosha oo dhan. Waad ku guuleysan kartaa oo keliya ganacsiga haddii aadan ixtiraamaynin warshadaha oo aadan naftaada u hibeysan hawsha. Haddii aad geliso saacadaha fursadahaaga guusha ayaa si aad ah u kacaya.
Cabsida ka maqan tahay
Dhamaanteen waxaan soo aragnay shucuur ah furitaanka aaladdeena, xiritaanka shaxdayada iyo waqtiyada gaarka ah waxaanna aragnay ficil macquul ah oo laxiriira lammaane FX ah oo maray, habdhaqanka suuqa kaasoo soo bandhigi lahaa fursad faa iido badan oo aad u wanaagsan. , haddii aan ahaan lahayn meel aan ka faa'iidaysanno. Waa inaad qaadataa fikirka ah in fursadahaani ay mar kale soo noqon doonaan, inta badan waxaa jira kala qaybsanaan aan kala go 'lahayn oo u dhexeeya qaabab kala duwan oo soo bandhigi kara fursadaha ka-faa'iideysiga. Waxaad ubaahantahay inaad iska indha tirto cabsida aad seegtay oo laga yaabo inaad markale seegto.
Haddii aad ka walwalsan tahay in fursadaha ay kugu dhaafi karaan inta lagu jiro saacadahaaga hurdada ka dibna maalgeli waqti aad ku horumariso istiraatiijiyad iswada oo aad u adeegsato qalabkaaga MetaTrader, taasi way ka jawaabi kartaa iyada oo kuxiran heerarka qiimaha qaar lagu dhuftay. Suuqyada forex waa kuwo firfircoon, si joogto ah isu beddelaya oo isu beddelaya sida dhacdooyinka dhaqaale iyo siyaasadeed. Weligaa ma jiri doontid fursad hal-mar ah oo aad ku guuldareysatay inaad ka faa'iideysato, fursadaha waa kuwo aan xad lahayn suuqa ugu badan iyo kan ugu weyn adduunka.
« Difaac naftaada marwalba marka aad ka ganacsaneyso FX